စက္ကန့်သုံးဆယ်အတွင်းမှာ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ (၁၉၂၀)ခုနှစ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေမယ့် နေရာလေးတစ်ခု <3 628 views
လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၉၂၀)ခုနှစ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေမယ့် အပြင်အဆင်တွေ၊ အငွေ့အသက်တွေရနိုင်တဲ့ Pirate Restaurant ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားကြလားဟင်…. ဗိုလ်တထောင်ကမ်းနားရဲ့ ရေပေါ်သေင်္ဘောဆိုရင်တော့ မသိသူမရှိကြဖူးနော်။ သူကအဲ့ဒီသင်္ဘောရဲ့ငါးလွှာမှာရှိပါတယ်။ Vintage ထဲကိုဝင်လိုက်ရင် သင်္ဘောထဲကိုဝင်သွားရသလို၊ ဟိုတယ်ထဲကိုဝင်သွားရသလို ခံစားမှုမျိုးလေးတော့ဖြစ် သွားစေတယ်နော့။ အဲ့ဒီကနေမှ အပေါ်တက်မယ်ဆိုရင် ဓါတ်လှေကားလေးနဲ့ တက်ရမှာပါ။
ဓါတ်လှေကားကလည်းရှေးဟောင်းပုံစံနဲ့ တံခါးကအစ အခုခေတ်ကိုယ်တွေမြင်နေကျမဟုတ်တဲ့ ပုံစံမျိုး။ ဘယ်အထပ်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတာလည်း လမ်းညွှန်လေးရေးပေးထားတယ်။ ကိုယ်တွေတော့ ငါးလွှာပဲတန်းတက်သွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပဲ ဓါတ်လှေကားကနေ စားသောက်ဆိုင်ဆီကိုက သိပ်မလျှောက်ရဘူး။ ဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ တစ်ခုသိရတာက လုပ်ထားတဲ့အပြင်အဆင်၊ သုံးထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ အဲ့ဒါတွေကို ဟိုးအရင်ခေတ်ကပစ္စည်းတွေပဲသုံးထားတယ်။ မီးခလုတ်ကအစ ကိုယ်တွေငယ်ငယ်ကတွေ့ဖူးတဲ့ အခုရှာလို့သိပ်မလွယ်တော့တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေသုံးထားတယ်။ ဆိုင်ထဲမှာ မီးလုံးတွေကိုလည်း ခပ်မှိန်မှိတ်လေးပဲသုံးထားပြီး အပြင်ကသဘာဝအလင်းရောင်ကိုပဲ အဓိကယူထားတယ်။
သူက Western Food လည်းရှိတယ်။ Thai Cuisine လည်းရတယ်။ နောက် Indian Food ဆိုရင်လည်း Indian Chef ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပေးတာတဲ့။ အက်မင်တော့ဒီတစ်ခေါက်ဘာစားခဲ့သလဲဆို ထိုင်းစာတွေ စားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါတွေကိုလည်း ပရိုမိုးရှင်းချပေးထားတာကို…။
အကြောင်းက ဒီလို… ထိုင်းအစားအစာဟင်းပွဲတွေမှာမှ အက်မင်အခုစားခဲ့တာတွေက ပုံမှန်ဆိုရင်တစ်ပွဲကို 10$ ရောင်းတာ။ အခုက July လအတွင်း တစ်ပွဲ (၁၀၀၀၀)နဲ့ရောင်းပေးသွားမှာတဲ့။ အဲ့ဒါအပြင် ဘီယာနှစ်ခွက်ပါပေးနေတာတဲ့။ ဆိုတော့ အချိန်လည်း သိပ်မရှိတော့တာမို့ မြန်မြန်လေးလက်တို့ပေးလိုက်တာပါ။ (အခြား Promotion တွေလည်းရှိသေးတယ်၊ အဲ့ဒါတွေတော့ Vintage Page မှာတင်ထားမယ်ထင်တယ်)
ဟင်းပွဲတွေရဲ့အရသာတွေကတော့ အကုန်ချုပ်ပြောရရင် မဆိုးပါဖူး။ သူ့ဟာလေးနဲ့သူ စားရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက အရသာတွေက လေးလေးပင်ပင်နဲ့သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေနဲ့ပဲ ပြီးသွားတာ။ အစပ်ဆိုရင်လည်း အရမ်းစပ်တဲ့ထဲမပါဖူး။ ထိုင်းစာဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ချဉ်၊ ငံ၊ စပ်ကိုမှ အစပ်ဟပ်တည့်တည့်လေးပဲ။ အစပ်နဲ့ပတ်သတ်လို့တော့ မစားနိုင်ရင် လျှော့ခိုင်းတာတို့ စားနိုင်ရင်ပိုထည့်ခိုင်းတာတို့တော့ မှာကတည်းကကြိုမှာလိုက်ရင် ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်မှာပါ။
အက်မင်တို့ဘာစားခဲ့သလဲဆို…. ဂဏန်းပျော့်ကြော်၊ ပြည်ကြီးငါးသုပ်၊ ငါးသံပုရာပေါင်း၊ Seabass တုန်ယမ်ပေါင်း၊ ပုစွန် အဲ့ဒါတွေပါပဲ။
ဂဏန်းပျော့ကြော် - ဂဏန်းပျော့ကိုကြော်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့အနှစ် ကြွပ်ကြွပ်လေးနဲ့ဆိုတော့ စားရတာတော့ တစ်မျိုးလေးပဲ။ ဒီတိုင်းစားလည်းအဆင်ပြေသလို ဆော့စ်လေးနဲ့တို့စားလည်း မဆိုးဘူး။
ပြည်ကြီးငါးသုပ် - အက်မင်အကြိုက်ဆုံးအစားအစာတွေထဲပါတယ်။ တချို့ ပြည်ကြီးငါးတွေဆို အနူးလွန်ပြီး ပျော့သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဆို ဘယ်လိုသဘောမကျမှန်းမသိဘူး။ စားရတာအဆင်မပြေရင်လည်း အလိုမကျတာတွေဖြစ်လာရော (ဒီလိုဖီးလ် အစားချစ်သူတိုင်းသိမှာပါ) ဒီဟာလေးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ ပြည်ကြီးငါးကစားလိုက်ရင်ကို ထုတ် ထုတ် ထုတ် ထုတ်နဲ့ မာမာဆတ်ဆတ်လေး။
Seabass ငါးတုန်ယမ်းပေါင်း - Seabass ကိုမှ တုန်ယမ်းBase လေးနဲ့ပေါင်းထားတာ။ တုန်ယမ်းအနံ့လေးနဲ့ အရသာလေးပါပေမယ့် အရမ်းကြီးတော့ အရသာမစူးဘူး။
ငါးသံပုရာပေါင်း - ငါးအသားနူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့ အရသာက ချဉ်စပ်လေး။ သိပ်လည်းမချဉ်သလို အရမ်းလည်း မစပ်ဖူး။
ပုစွန်ထုပ် - သူကကျတော့ ပုစွန်ရဲ့ဘာမှမပါတဲ့ သဘာဝအရသာအတိုင်းလေးပဲ။ အဲ့ဒါကိုမှ ဆော့စ်ချဉ်စပ်လေးနဲ့တို့စား။ ဆော့စ်ကကျတော့ ပူစီနံလေးတွေကိုမှ ကျိတ်ပြီးထည့်ထားတဲ့အတွ့် အဲ့ဒီအနံ့နဲ့ အရသာလေးတော့နဲနဲလေးပါတယ်။
ပုံမှန်သာမန်ရိုးကျနေရာတစ်ခုကနေကွဲထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးလည်းရှိတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Gathering လုပ်ချင်တာမျိုး၊ ချစ်သူနဲ့ ဒိတ်ချင်တာမျိုးဆိုအဆင်ပြေတယ်။ အလုပ်ကိစ္စဘာညာဆိုလည်း သင့်တော်စေမှာပါ။ မွေးနေ့တို့ အခြားဘာပွဲ၊ ညာပွဲ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း နေရာကောင်းလေးဖြစ်မှာပါ။
ကဲ… စက္ကန့်သုံးဆယ်အတွင်းမှာ ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၉၂၀)ခုနှစ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေမယ့် နေရာလေးတစ်ခုကိုတော့ လမ်းညွှန်ပေးခဲ့ပြီနော်…။
#MyLann #Online_Restaurant_Directory#Online_Food_Guide#Food_Reveiw_in_Yangon #Foodie_Myyanmar#Foodie #Food_Lover #Food_Crazy #Food
#Vintage_Luxury_Yacht_Hotel #Vintage #Hotel